Nidaamka Tayada - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
Muunad & qiime
Waxaan awood u leenahay wax ka qabashada mid ka mid ah shuruudahaaga tayada. Waxaan ku jirnay suuqa muddo sanado ah hada nidaam dhisan oo la ansixiyay hadana waxaan si isdaba joog ah u wanaajinaynaa heerarkeena si aan ula kulanno macaamiishayada rajadooda markay tahay tayada wax soo saarka.
Sidaa darteed waa in boorsooyinkeenna ay la tartami karaan dhammaan noocyada caalamiga ah sida TOV, CSCV, SGS, TUV iyo ITS iwm.
OEM waxay ku kacaysaa baahiyaha iibsadayaasha waxaanan dammaanad ka qaadaynaa tayada wax soo saarkeenna. Qanacsanaantaadu waa mudnaanta koowaad. Haddii aad isku aragto inaadan ku qanacsaneyn waxaan ku siineynaa dib u sameynta alaabta ama soo celinta lacagtaada.
Raadinta Xakamaynta Laga Bixiyo Badeecada ilaa Raritaanka
Arimaha Amaanada Ayaa Lagu Waajahayaa Khibradeena
Way fududahay in lagu tanaasulo xakamaynta tayada ee Shiinaha. Waxyaabaha ma ahan kuwo aad u hufan halkan shirkado badan ayaa u muuqda inay laaluushaan xakameynta tayada xisbiga 3aad. Si taas looga fogaado, waxaan kiraysanay koox aan leenahay oo QC ah waxayna iskood u shaqeeyaan iyaga oo aan wax faragelin ah ka helin warshada. OEM waxay hubisay inay shaqadooda si daacadnimo ah u qabanayaan iyagoo raacaya sharciyo adag oo iyaga u gaar ah kuwaas oo aan u oggolaanayn inay ku siiyaan damaca ah samaynta lacag dheeri ah.
Xakameynta Waxsoosaarka Laga Soo Saarayo Shirkadaha Ilaa Xamuulka
Tayo ahaan kaliya uma jeedno tayada wax soo saar, waxay sidoo kale kujirtaa xakamaynta sahayda kahor intaanan bilaabin wax soosaarka tirada badan. Taas ka sokow, sidoo kale waa waajibkeena inaan si taxaddar leh ugu rarno xirmooyinka ugu dambeeya weelka si ammaan ah loogu gaarsiiyo albaabkaaga. Sidaa darteed, khubaradayada QC waxay isha ku hayaan geeddi-socodka oo dhan midigta bilawga ilaa xamuulka.
Wejiyadaha Kala Duwan ee Hawsha QC
Shaqadooda waxaa ka mid ah fahamka shuruudahaaga iyo gaarsiinta dhammaan faahfaahinta oo ku qoran luqadda Shiinaha qolka muunada. Waxay sidoo kale xiiseeyaan qiimaha iyo heerka tayada la filayo iyagoo soo jeedinaya xoogaa horumar ah oo qolka muunada ah.
Farsamayaqaanadeena qolka muunad qaadashada waxay waqti badan ku qaataan baahiyahaaga iyo qeexitaannadaada si ay kuu siiyaan qiimaha ugu habboon ee kaa caawin doona inaad gaarto qiimaha aad higsaneyso. Inta lagu jiro muunad qaadista, liis ay ku qoran yihiin faallooyin farsamo ayaa sidoo kale loo sameeyay soosaarka tirada badan.
Kani waa kulanka wax soo saarka kahor oo ay kujiraan dhammaan farsamayaqaannada, iibka iyo QC oo qayb ka ah mashruucaaga. Dhammaan faahfaahinta ku saabsan mashruucaaga waa laga wada hadlay sida habsami u socodka wax soo saarka, dhibcaha tayada iyo faahfaahinta baakadaha.
368 ChengYi Ave. JiMei Xiamen Shiinaha
Weydiimaha ku saabsan wax soo saarka ama pricelist, fadlan naga tag oo waxaan la xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.